ခရီးသွားကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရန် မြန်မာ-ထိုင်း-လာအို သုံးနိုင်ငံ ချိတ်ဆက်စေမည့် စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ တာချ? - Yangon Media Group
ခရီးသွားကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရန် မြန်မာ-ထိုင်း-လာအို သုံးနိုင်ငံ ချိတ်ဆက်စေမည့် စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ တာချ?
တာချီလိတ်၊ ဇူလိုင် ၂၃
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အားကစားရေးရာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ Low Season ကာလခရီးသွားကဏ္ဍမြှင့်တင်သောအား ဖြင့် ထိုင်းစက်ဘီးစီးအဖွဲ့နှင့် လာအိုနိုင်ငံသား စက်ဘီးစီးအဖွဲ့များသည် ဇူလိုင် ၂၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက တာချီလိတ်မြို့တွင်း၌စီးနင်းခဲ့ ကြောင်း ထိုင်း-မြန်မာ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီမှ သိရသည်။
” Low Season ကာလမှာ ခရီးသွားကဏ္ဍမြှင့်တင်စေရန်၊ ချင်းရိုင်ခရိုင် အနားယူအပန်းဖြေစရာ ကောင်းသည့် ခရီးဆုံးပန်းတိုင်များအား ထိတွေ့ခံစားနိုင်စေရန်၊ မြန်မာ- လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် သုံးနိုင်ငံချိတ် ဆက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
စက်ဘီးအစီး ၂ဝဝ၊ စက်ဘီး အားကစားသမား ၂ဝဝ တို့နဲ့ မဲ ခေါင်မြစ်ကမ်းနံဘေး စက်ဘီးဖြတ်စီး အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ဇူလိုင် ၂ဝ ရက်ကနေပြီး ၂၂ ရက်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အခုလို စက်ဘီးစီးဝါသနာ ရှင်တွေ ချင်းရှဲန်-မယ်ဆိုင်-တာချီ လိတ်ခရီးကြား ၄၈ ကီလိုမီတာ စီးနင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံသားကစားသမားများဖြစ်သည့် Mr.Suchart Jalkwang က ပြော ကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသား ကစားသမားများဖြစ်ကြသည့် Mr.Suchart Jalkwang ဦးဆောင်သည့် ထိုင်းစက်ဘီးစီးအဖွဲ့နှင့် လာအိုနိုင်ငံသား စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ ၁၈၅ ဦးတို့သည် ဇူလိုင် ၂၂ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၅ဝ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင် မြို့မှ တာချီလိတ်မြို့သို့ မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ် (၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အမှတ် (၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှတစ်ဆင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးအတိုင်း၊ ဆန်ဆိုင်း (ခ) ရပ်ကွက်ရှိ ရှမ်းရိုးမကွင်းမီးပွိုင့်မှ မိုးလုံလေလုံအား ကစားရုံအတိုင်းထွက်ခွာ၍ ရွှေတိဂုံဘုရားကုန်းပေါ်သို့လည်းကောင်း၊ ထို့နောက် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းအတိုင်းထွက်ခွာ၍ ဆေးရုံဟောင်းရှေ့အလမ်းဆုံသို့လည်းကောင်း၊ ယင်းမှ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးအတိုင်း မြန်မာ- ထိုင်း အမှတ် (၁) ချစ်ကြည်ရေး တံတားသို့လည်းကောင်း လည်ပတ်စီးနင်းကာ တာချီလိတ်မြို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်။
မိုင်လေဆိုင်းရပ်စ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ သုံးစွဲခြင်းမှ ခေတ္တ အနားယူ
အောင်လံမြို့နယ် ရုံးဆိပ်ကျေးရွာ၌ ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုက်စားနေမှုကြောင့် နေအိမ်များ ပြောင်းရွှေ့?
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့သော သာပေါင်းမှ ကလေးငယ်မှာ ကျောက?
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော ကုလဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကို သဘောမတူဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်?